Ndị na -eweta efere efere na ụlọ ọrụ - China Plate Manufacturers
Epekere Strata bụ efere na -akwado ịdị arọ nke nwere nnukwu elu ala, nke a na -ejikarị dị ka efere etiti iji bulie mkpuchi elu ya. A na -ejikwa ya ebe niile na ngwa nkwado ala.
A na -ahazi efere ntupu pụrụ iche maka idozi mesh, nke ejikọtara ya na bolts dịka akụkụ nke sistemụ nkwado ala iji kwado okwute. A na -ejikarị ya na Ngwuputa, Ọwara na mkpọda wdg dịka akụkụ kachasị na ngwa nkwado ala.
Efere dị larịị bụ efere na -ebu ihe dị mfe ejiri yana resin bolt, bolt cable, bolt threadbar, okirikiri okirikiri na iko glassfiber wdg iji nye usoro nkwado na okwute dị na ngwa nkwado ala, nke a na -ejikarị na -egwupụta akụ, ọwara na mkpọda. oru ngo.